किन कुनै पनि राज्य को व्यवस्था पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ?
व्यवस्था, राज्य र कानून
विरलै मानिसहरू किन यो व्यवस्था पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ विचार। अभ्यास लागि हाम्रो राज्य नियम केही बासिन्दा हुन् त्यहाँ भङ्ग गर्न भनेर देखाउँछ। तर व्यवस्था छैन बस यति हो, र प्रत्येक नागरिक तिनीहरूलाई पालन गर्न हुनेछ। पहिलो, यो तपाईं समाजमा एक ब्यालेन्स राख्न र लोभी र बलियो देखि कमजोर मान्छे रक्षा गर्न अनुमति दिन्छ। निस्सन्देह, आफ्नो जीवनमा एक पटक हरेक नियमहरूमा तोड्न। तर धेरै पनि किन यो व्यवस्था पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ आश्चर्य छैन?
त्यसैले नियम पालन गर्न तपाईं किन चाहिन्छ? केही मुख्य कारण नाम। पहिलो र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अराजकता बाट सुरक्षा हो। हाम्रो देश को सबै बासिन्दाहरू केही नियमहरू पाठ्यक्रम र पालना गर्न बन्द हुनेछ भने, कानून, त्यहाँ एक खण्डहर आउनेछ, र देश अस्वीकार गर्नेछ।
कानून - सम्झौता एक प्रकारको कि नागरिक, संगठन, ठूलो कम्पनीहरु र सरकारी शरीर को विभिन्न विभाग बीच सम्बन्ध ठीक गर्नु गर्न अनुमति छ। कुनै निश्चित नियम र प्रतिबन्ध छ भने, त्यसपछि अराजकता राज्य मा सुरु हुनेछ। त्यहाँ यस्तो सम्बन्ध विनियमन कुनै कानून हो भने, सुरु गर्न गृहयुद्ध, र यसको परिणाम दुःखी र irreparable हुनेछ।
किन यो व्यवस्था पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ अन्य कारणहरू छन्। यो हाम्रो नागरिक धेरै केही नियमहरूको उल्लंघन लागि पेनाल्टी डर छ कि टिप्पण लायक छ। शायद आफ्नै मा फेला छैन विशाल जरिवाना तिर्न वा जेलमा समय सेवा गर्न चाहने। तर व्यवस्था पालन गर्न विफलता यस्तो नतिजा गर्न ठीक जान्छ। सजाय बच्नको लागि, धेरै आचरण को नियम ले हटना छैन प्रयास र स्थापित गरिएको अधिकारीहरूले शासनकालको छ कि नियम सँग जुध्न छैन।
साथै, नागरिक बहुमत आफ्नै लागि र आफूलाई लागि मानिसहरू डराउँदैनन्। साँच्चै, केही नियमहरू पालन गर्न विफलता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को क्षति र राम्रो प्राप्त हुन सक्छ। र कुनै एक चाहन्छ। पनि देश को सम्पूर्ण जनसंख्याको आचरणको स्थापित स्तर र सदियों भन्दा सिर्जना भएको छ कि कानून इन्कार यदि ठाँउ, सडक मा हुनेछ जो मिनेट को एक जोडी, को लागि वर्तमान कम्तिमा। यस मामला शासनकालको अराजकता मा।
नागरिक को चासो सुरक्षा
कानून पालना गर्न दायित्व जन्म देखि नागरिकहरु डाले। आमाबाबुले आचरणको आधारभूत नियमहरू व्याख्या गर्न, आफ्ना छोराछोरीलाई हुर्काउन। तर, धेरै आफ्ना छोराछोरीलाई, व्याख्या यस्तो व्यवस्था भनेर किन महत्त्वपूर्ण छ तिनीहरूलाई पालन गर्न। नागरिकहरु को राज्य गतिविधिलाई को सुरक्षा - माथि कारण बाहेक, त्यहाँ अर्को छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। अर्को शब्दमा, सबै व्यवस्था-पालन नागरिकहरु आफ्नै राज्य द्वारा सुरक्षित छन्। एक व्यक्ति व्यवस्था को स्थापना नियम उल्लङ्घन गर्छ भने, यो तिनीहरूको प्रवर्तन र राज्य को लागि प्रतीक्षा गर्न लायक छ।
अब तिमी किन यो व्यवस्था पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ थाहा छ। आखिर, तिनीहरूले देश अराजकता र अन्योल छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न बनाइयो। धेरै नियम आवश्यकता हो, आवश्यक महत्त्वपूर्ण छन् र बस पालन गर्न भने सकिन्छ। शायद कुनै एक कुनै स्थापित कानुनी मान्यता छ जहाँ हुन चाहनुहुन्छ छैन गर्नुभयो। आखिर, यो समाज बर्बाद छ।
Depremirovanie - यो ... बोनस र depremirovanie कर्मचारीहरु
"रूस को मानार्थ दाता" को शीर्षक। कसरी मानार्थ दाता रूस बन्न?
राष्ट्रपति प्रशासन संरचना। यसको कार्य र शक्ति
हालको खाता बाट रकम कटौती क्रम: निर्देश
पासपोर्ट को वैधता कसरी जाँच गर्ने?
फ्रिज मा तापमान र उत्पादनहरु को आफ्नो जीवन यसको प्रभाव
महान् Yazici क्लब पगरी5* Marmaris फोटो, मूल्यहरु र रूस देखि पर्यटकहरु को समीक्षा
ब्लेडरलाई ठुलो छ, किन यो भयो र के गर्ने?
एक परी कथा जीवन्त गर्दा स्मारक साना मत्स्यस्त्री
Armudu - टर्की चिया कप
नयाँ विवाहित जोडी को लागि उपहार कसरी छनौट गर्ने?
घर मा सही तिखार्दै चक्कु कस्तो छ?
अंग्रेजी सिक्न चाहनेहरूको ती, ओडेसा एक विविध चयन प्रदान गर्दछ
वर्ष को महिना: महिना कति वर्ष र तिनीहरूले भनिन्छ। 12 महिना को सबै
रूसी - राज्य रूसी भाषा को संवैधानिक परिभाषा
तेल परिदृश्य शुरुआती कसरी गर्न
एउटा सुन्दर डिजाइन र परिष्कृत स्वाद - कावीयार संग Tartlets